Banyere Anyị - Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd.
Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd bụ a keukwu enterprise onye raara onwe ya nye n'ichepụta CNC rawụta, laser igwe maka osisi, PVC, acrylics, metal, nkume, akpụkpọ anụ wdg ihe ọnwụ ma ọ bụ ihe osise kemgbe afọ 2006, na malitere ime mba ụwa. ahia kemgbe afọ 2016. Ngwaahịa na-ewu ewu ma n'ụlọ na ná mba ọzọ, isi ahịa na-ekpuchi Europe, North na South America, Africa, Asia, ọtụtụ mba na ebe.
Igwe CNC niile kwesịrị ịgafe nyocha siri ike tupu ebuga ya na ngwugwu ọkọlọtọ mbupụ raara onwe ya nye, nke dabara maka ụzọ ụgbọ mmiri, ikuku ma ọ bụ ụgbọ njem.Ngwaahịa kwesịrị itinye akwụkwọ CE, ISO, FDA ma ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ.Factory cover banyere 3000 square mita, gụnyere iche iche R&D center, n'ihi na ọhụrụ ngwaahịa R&D, mbụ ngwaahịa ọkwa mmelite, nke na-erubere ahịa arịrịọ OEM, ODM.
E nwere banyere 300 mkpara, 10 engineering ọkachamara na 18 oru injinia gụnyere, Mgbe afọ nke na-aga n'ihu mgbalị na ahịa na-akwado ruo n'oge, ọ mepụtara a na-arụ ọrụ usoro nlereanya nke imewe, mmepụta, ahia otu nkwụsị ọrụ.Ndị ahịa ọhụrụ na ndị dị adị na-agbasa na South America, Middle East, Southeast Asia, Africa, Europe na Counties na ebe ndị ọzọ.
Nabata ndị enyi ụwa niile na-abịa ileta ma na-atụ anya nkwado na-aga n'ihu biko.Igwe rawụta CNC ndị na-ere ahịa na ndị nkesa na-achọkwa ụwa niile.Daalụ maka ijikọ na email, whatsapp, ma ọ bụ ịkpọ oku.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd.
Anyị na-pụrụ iche na osise igwe, laser igwe, ngwa anya eriri ọnwụ igwe na ndị ọzọ metụtara ngwaahịa,
Anyị bụ ndị ọkachamara emeputa nke CNC osisi lathe na osise igwe.Anyị na-ere CNC lathes na China kemgbe 2009 na mba ofesi kemgbe 2013.
Anyị igwe nwere ụdị nile nke àgwà asambodo, anyị nwere tozuru okè mmepụta akara, zuru ezu na nkà mmụta sayensị àgwà management usoro, magburu onwe ahịa otu na mgbe-sales ọrụ otu.
Anyị na-na akara na azụmahịa nkà ihe ọmụma nke "nwere ntụkwasị obi na pragmatic, aga n'ihu" na-aga n'ụzọ nke ịga nke ọma na zuru okè mgbe-sales ọrụ.
Anyị na-ere CNC lathes na China kemgbe 2009 na mba ọzọ kemgbe 2013. Lathes anyị na-ere nke ọma n'ụwa nile, dị ka North America, Europe, Middle East na mba ndị ọzọ.
Ka ọ dị ugbu a, igwe anyị agafeela asambodo CE, ISO na SGS.Anyị nwere tozuru okè mmepụta ahịrị, zuru ezu na nkà mmụta sayensị àgwà management usoro, magburu onwe ahịa otu na mgbe-sales ọrụ otu.
Olu mbupụ kwa afọ
nde yuan +